WPS Office alpha 18 Architecture 64-bit | Avy amin'ny Linux
marianogaudix | | About us
Araka ny asehon'ny lohatenin'ny lahatsoratra dia afaka manandrana ny WPS Office ho an'ny solosaina misy processeur 64-bit isika izao.
Fitaovana Mini Quick Access Toolbar handefasana lahatsoratra voafantina.
spreadsheets mifanaraka ny kajy fahatapahana.
Fandikana vaovao avy amin'ny fiteny poloney, misaotra anao Andrzej Kamiński.
Afaka manova sy misafidy dinika amin'ny fiteny isika izao.
Ny WPS Office alpha 18 Linux dia azo alaina amin'ny maritrano 64-bit sy 32-bit.
Mitombo sy manampy amin'ny fandikan-teny ny vondron'olona WPS Office. Ny fiarahamonina WPS Office poloney dia nandika ny rakitra UI fiteny rehetra avy amin'ny teny anglisy ka hatramin'ny poloney ho amin'ny poloney. Miaraka amin'ny fiteny rosiana izy ireo no fiteny manana fandikana UI tsara indrindra. Ankoatr'izay, nanatevin-daharana ireo vondrom-piarahamonina Romania, Slovenia ary Korea Atsimo.
Fitsapana ny WPS Office alpha 18 ho an'ny Linux Voamariko fa tsy mandeha tsara ny fandikana amin'ny teny Espaniôla ny WPS Office alpha 18 UI. Nanana an'ity olana ity tamin'ny WPS Office Writer aho.
WPS Office alpha 18 ho an'ny fampidinana Linux:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » WPS Office alpha 18 64-maritrano kely
Bperez dia hoy izy:
Misaotra noho ny vaovao, ny olan'ny fandikan-teny amin'ny mpanoratra dia azoko ihany koa ny alpha 16 napetrako tao amin'ny solosaina saingy, na eo aza ny fitoviana amin'ity suite ity amin'ny MSO dia mbola tsy maharesy lahatra ahy izany no nametrahako LO 4.4 izay ampiasaiko matetika.
Mamaly an'i Bperez
Raha ny amiko dia mampiasa ny LO Writer bebe kokoa aho hanao ny asako.
Misaotra anao nandao ny hevitrao sy ny zavatra niainanao.
Ever dia hoy izy:
Rindrambaiko maimaim-poana ve izany?
Mamaly an'i Ever
Izy io dia rindrambaiko manana, fa ny klone marina indrindra an'ny MS Office hatreto. Miasa tsara izy io, saingy manana izany drawback kely izany, tsy loharano misokatra - ho an'ireo izay tsy manao fanilikilihana amin'ny filamatra nomeny.
Nanampy koa izy fa tsy voadika amin'ny teny espaniola tanteraka.
Rorro dia hoy izy:
Fanontaniana iray, ao amin'ny "excel" an'ny Office WSP afaka manao sary ve ianao? ny kinova manana ahy dia voasakana io safidy io.
Valiny tamin'i Rorro
Fanamarihana: "Neny" Fedora dia niteraka ny zanany vavy 22 taona.
Efa nampiditra an'i UselessD tamin'ny toerany ve i Fedora?
Misalasala aho fa hisy zavatra toa izany.
Miezaka aho mahita raha azonao apetraka ao amin'ny banga ampiasainao… .hahahaha
Mahaliana, satria leo aho tamin'io mihinana ny fiankinan-doha amin'ny multiarch.
Rainbowarrior Solrak dia hoy izy:
Manontany tena aho raha manana spyware io ?????
Valio an'i Rainbowarrior Solrak
Eusebio dia hoy izy:
WPS dia programa tsy miovaova tanteraka ary ny angano fa manana fampifanarahana tsara kokoa amin'ny rakitra LO / OO dia izay fotsiny, angano lavitra ny zava-misy.
Ary koa, tsy manohana ny opendocument io ary ny governemanta sinoa no ao ambadik'ity rindrambaiko tompony ity, tsy matoky volo aho.
Valiny tamin'i Eusebio
daveman76 dia hoy izy:
Ry malala fa raha miasa ny mpanara-tsipelina, ampiasaiko mifanitsy amin'ny LO izany satria mifanaraka kokoa amin'ny MS Office ity rindrambaiko ity, tena safidy hafa io! Manana tifitra aho fa tsy mamela ny handefa sary ity mpamoaka lahatsoratra ity.
Mamaly an'i daveman76
Raha te hametraka fanamarinana tsipelina izy ireo http://wps-community.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=6163
HD HD dia hoy izy:
Valio ny HD HD
Mbola misy antony bebe kokoa aza hialana amin'ny Birao Libre